Basolwa Ngokuyekelela u Constable Obulele Abaphathi Bamaphoyisa – eHowzit
Basolwa Ngokuyekelela u Constable Obulele Abaphathi Bamaphoyisa
IMINWE isikhombe kubaphathi besiteshi samaphoyisa sase Port Sepstone ngesenzo sephoyisa lesifazane u Constable Balungile Pretty-girl Madlala, 35, osolwa ngokudubula abulale umkhwenyana,39 Thulani obengumsebenzi wase Hibiscus Coast Municipality, umamezala abangabakwaMadlala kanye nomakhelwane ongadalulwanga igama lakhe endaweni yase Bhobhoyi eMbontsha ngeSonto mhla ziyi-7 kuyo le-ephezulu.
Ngokwemithombo engaphakathi emaphoyiseni ibikele abezindaba ze eHowzit ukuthi umsolwa waqala wazisa omuny wabaphathi besiteshi sase Port Shepstone, ngenkinga ayebhekene nayo ekhaya nokuthiwa waze wabazisa ukuthi isimo sibi kakhulu ngendlela yokuthi kungenzeka enze umhlola.
“Mina ngisola bona laba abasiphethe ngoba babazi ngesimo ayebhekene naso, walubika usizi lwakhe kodwa bangamunaka, ngosuku okwenzeka ngalo isigameko wafonela omunye umphathi nowavele watshela umphathi oqondene naye ukuthi makamudedele agoduke. Okwangixaka kakhulu ukuthi yini eyenza angathumeli uphiko lwe Technical Response Team (TRT) ukuba limuphuce isibhamu asiwe endaweni yokuhlala amaphoyisa ngoba wakubeka kwacaca ukuthi angase enze into efana nalena” kubeka umthombo ongaphakathi esingeke salidalula igama lawo ngokuvikela umsebenzi wawo.
Lomthombo obudinwe ugane unwabu nobe uze ukhombe ngekhanda omunye wabaphathi owayenolwazi uqhuba uthi; baqhamuka nje sebezomuvikela enkantolo izolo kodwa bebe behlulekile ukwenza umsebenzi wabo ngesikhathi , kumanje nje umdeni wakhe ususabise ngokumbulala nokuyikhona okwenze aphume ngobuningi amaphoyisa ukuyoqapha isimo”.ube sewuphetha ngokuchaza indlela lo wesifazane okuthiwa ubehlonipha ngayo emsebenzini wakhe.
Ongumkhulumeli wabasebenzi uMnu Danca we Popcru uthe bayazwelana kakhulu nesimo umsolwa abhekene naso washo nokuthi bazoqhubeka nokumeseka kuze kuphele icala.
Kanti-ke unqabile ukuphawula ngezinsolo ezibhekiswe kubaphathi bamaphoyisa, kanti loludaba selungithwe ngabe IPID nokubenzima ukuba sixhumane nabo.
Khona manjalo sekuqubuke amahebezi okuthi umsolwa usenqabe waphetha ukusayinela ukuphuma kwezimali zendoda kuze kuqhutshekwe nezinhlelo zomngcwabo.